“Mahatsapa Fanapenam-bava Tanteraka Eny Amin’ny Tontolo Aho”: Manjavona Ny Fahalalahan’ny Aterineto Ao Thailand · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Jona 2014 4:41 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Español, 日本語, English
Hetsi-panoherana ny fanonganam-panjakana tao Bangkok, 29 Mey 2014. Saripikan'i Prachatai (CC BY-NC-ND 2.0)
Ho fiarovana ny mpanoratra ny lahatsoratra dia tsy navoaka ny anarany.
Rehefa nanambara ny fampiharana ny lalàna miaramila ny Jeneralin'ny tafika Thailandey Prayuth Chan-Ocha tamin'ny 20 mey, dia nahatsapa izany avy hatrany ny mpiasan'ny famoaham-baovao. Amin'ny alalan'ny lalàna dia tsy mahazo mitatitra zavatra matroka momba ny resaka miaramila intsony ry zareo — eny fa na dia ny fijotson'ny tsenam-bola aza . Naka manontolo ny fifehezana ny tafika tamin'ny 22 Mey 2014, miantso ny tenan'izy ireo ho “Vaomieram-Pirenena Hitandroana ny Filaminana sy ny Fandriampahalemana” (NCPO).
Taorian'ny fanongamnam-panjakana tamin'ny herinandro, dia mainty tanteraka ny fahitalavitra ary tsy miato miverimberina misolo toerana ny fotoam-baovao isan'andro amin'ny fantsona rehetra ny hiram-pitiavan-tanindrazana. Tao anatin'ny andro vitsivitsy izay dia ny fantsona fahitalavitry ny tafika irery ihany no mahazo alalana hitati-baovao — izay milaza ny zavatra tsara momba ny fanonganam-panjakana avokoa, mazava ho azy. Noho ny baikon'ny Vaomiera, dia voarara tsy mahazo mitsikera ny tafika na mizara votoaty mety “hanimba ny rindram-piaramonina sy ny filaminam-bahoaka” ny famoaham-baovao an-tserasera na ivelan'ny aterineto. Tsy maintsy milaza tatitra any amin'ny NCPO ny mpanome tolotra aterineto.
Iadiana mafy ny fahalalahana maneho hevitra ao Thailand. Mahatsapa fanapenam-bava tanteraka eny amin'ny tontolo (rivotra) aho. Mety hahatonga anao eny amin'ny fitsarana miaramila ny fitsikerana fotsiny ny Vaomiera. Rehefa tsy afa-miasa ny fampitam-baovao, dia miteraka tsaho tsy hita avanavana ny tsy fisian'ny vaovao. Miely haingana dia haingana an-tserasera ny fikoropahana, noho ny fampilazan'ireo mpiasam-panjakana amin'ny fomba milamina ireo tapaka sy namana izay mavitrika an-tserasera fa mety ho tapaka ao anatin'ny minitra vitsy ny tambajotra sosialy. Misy ihany koa ny tsaho fa mety ho tapaka tanteraka ny aterineto, na dia mbola tsy nitranga aza izany aloha hatreto.
Fa maninona no tena ilaina ny fahalalahana maneho hevitra? Nandritra ny famoretan'ny miaramila ny fihetsiketsehan'ireo Mena Akanjo tamin'ny 2010, dia tsy nisy fantsona fahitalavitra nahazo nitatitra ny toe-draharaha. Nampiasa fitaovam-piadiana sy bala tena izy ny tafika hanaparitahana ny mpano fihetsiketsehana, vokany 98 no maty. Noho ny tsy fahampiam-baovao, dia nanohana ny tafika tamin'ny fandripahan'olona tao afovoan-tanànan'i Bangkok ny atsasaky ny firenena ary nihevitra fa mila vonoina ireo mpanao fihetsiketsehana ireo. Ny fahalalahana maneho hevitra no arofanina hisorohana ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona. Rehefa fantatrao fa manatri-maso ny fampitam-baovao dia sarotra kokoa ny manao zavatra tsy mety.
Mety hamotika ny nanaovana ny aterineto ho misokatra (malalaka) ho an'ny rehetra ao Thailand ireo fepetra noraisin'ny Vaomiera. Mitarika fanivana-tena tsy hilaza zavatra ny fikoropahana sy ny tahotra. Tsy vitan'ny fehezin'ny tafika sy ny polisin'ny serasera ihany ny aterineto, fa (fehezin’) ireo olom-pantatra ihany koa. Potika ny fifampitokisana eo amin'ny namana sy ny fianakaviana, ary indraindray aza dia mahatonga fifampitoriana any amin'ny manampahefana. Mitarika fanivana-tena tsy hilaza zavatra izany tahotra miely na aiza na aiza izany.
“selfie-n'ny fanonganam-panjakana” ao Thailand mivoaka Twitter avy amin'i @MarcoTexRanger.
Ao anatin'izany toe-draharaha izany dia ny aterineto no fialofana farany. Na dia milaza aza ny Vaomiera fa vonjimaika ireo fepetra ireo, dia tsy misy mahalala marina hoe haharitra hafiriana moa izany ‘vonjimaika’ izany ary mety hiharatsy hatraiza ny toe-draharaha. Mitatitra ny fifampizarazaran'ny olom-pirenena ‘selfies’ sy sarim-poninkazo an-tserasera ny Fampitam-baovao, saingy tsy mitaratra ny fihetseham-pon'ny olom-pirenena manoloana ny fanonganam-panjakana izany — fa izay ihany ny zavatra azo atao. Tsy midika ho fankatoavana ny fanginana. Tsy te-hangina izahay, saingy iza no hampidi-doza ny tenany hoentina eny amin'ny fitsarana miaramila? Izaho manokana dia tsy manaiky ny handrombahana ny fahefana amin'ny alalan'ny hery mitam-piadiana sy ny famefena ny fahalalaham-pitenenana, izay mety tsy ho azo atao ao an-toerana intsony. Na dia kely aza ny fanantenako, dia maniry ny hiverenan'ny fahalalahan'ny aterineto eto Thailand aho.
Tandrovin'ny Global Voices fatratra ny fiarovana ny mpandray anjara ato aminy. Noesorinay ny anaran'ny mpanoratra ity lahatsoratra ity hiarovana azy.